Accueil > Gazetin'ny nosy > Naivo Raholdina : Mpandainga gaigilahy
Naivo Raholdina : Mpandainga gaigilahy
Tsy hoe rehefa solombavambahoaka akory na mahay mikabary kely dia tsy maintsy manana ny fahamarinana rehefa miteny manaloana ny mpanao gazety akamakama. Mba olona miseho ho manana ny maha izy azy eto amin’ny ingahy Naivo Raholidina na i “Betaintsofina” kanefa tsy menatra ny mandainga imasom-bahoaka.
Nitafa tamin’ny mpanao gazety mantsy ity depiote IRD ity, omaly, ary nilaza fa gazety mpandainga sy mpanosopotaka olona fotsiny ny La Gazette de la Grande île manoloana ilay lahatsoratra nivoaka momba ilay raharaha ady tany eny amin’ny kaominin’i Fenoarivo, ny zoma 01 oktobra lasa teo. Raha fitinina kely ny tantara dia niray tsikombakomba amina mpianadahy nidoboka am-ponja eny Antanimora noho ny resaka fivadiham-pitokisana i Naivo Raholdina, ary mangataka ny hanesorana ny fitoriana tamin’ireo mpitory izay tsy iza fianakaviana mpandova amin’ireo voafonja ihany. Sady nandrahona no nanao teny ratsy variraka tamin’ireo mpitory i Betaintsofina, nilaza fa hahita raharaha aminy raha tsy mivoaka ny fonja ireo namany migadra. Araka teny nataony nandritra ny valandresaka ho an’ny mpanao gazety, omaly, dia diso avokoa ny resaka nataon’ireo mpitory sy lahatsoratra navaokan’ny La Gazette de la Grande île.
Voalohany aloha, nilaza ity depiote IRD ity fa tsy nisy akory ny taratasy fifanarahana nifanaovan’ireo mpandova momba ny famarotana ilay tany hiadiavana eny Fenoarivo, ka noho izany dia tsy mitombina ny fiampangana ireo mpianadahy voafonja ho nanao fivadiham-pitokisana. Izay aloha dia efa lainga be satria nisy ny fifanarahana natao ary nosoniavin’ny prefen’ny polisy eto Antananarivo, ny 08 jolay 2021, araka ny taratasy hita amin’ny sary. Faharoa, nilaza i Depiote Betaintsofina fa tsy nitaky vola 5 tapitrisa ariary tamin’iza na iza izy kanefa misy ny taratasy mazava manamarina izany. Tsara tsipihana eto fa tsy ireo mpandova nitory akory no notakian’i Naivo Raholdina vola 5 tapitrisa ariary araka ny fanazavana nomeny fa ilay olona nikàsa hividy ny tany.
Tsara marihana koa fa na tao amin’ny televezionina Real TV na nandritra ny valandresaka ho an’ny mpanao gazety nataony, omaly, dia taratasy fanamarinana maha mpandova laharana 214 tamin’ny 13 desambra 1960 foana no asehoan’ingahy depiote sy ny zanak’ireo nampidirina am-ponja kanefa didy tsy manan-kery intsony io laharana 214 io satria efa nisy ny didim-pitsarana vaovao nivoaka tamin’ny 20 febroary 2018, mitondra ny laharana faha 746 izay manafoana ilay didy laharana 2014. Raha mbola manan-kery io taratasy asehoan’i Betain-
tsofina amin’ny haino aman-jery io, azo antoka fa tsy nampidirin’ny mpitsara am-ponja vonjimaika mihintsy ireo mpianadahy mpisoloky na nivadim-pitokisana.
Izany rehetra izany no porofo mitohaka amin’ny tenda fa mpandainga gaigilahy ny Depiote Naivo Raholdina. Nilaza moa ity farany fa hiady amin’ny La Gazette de la Grande île mandrapafatiny, tokony ho fantany tsara anefa fa tsy hahatahotra na oaviana na oaviana olona tsy ampy refy na vazimba 1,40m tahaka azy mihintsy ny gazety na hitondra ny raharaha eo anivon’ny fitsarana aza ny tenany.